Bvunzo dzeFAFAQ Quebec | BLI Zvikoro zveMitauro muCanada
Le Test d'Évaluation de Français pour l'accès au Québec (TEFaQ) muedzo wechiFrench wakawandisa uyo une chinangwa chekuyera mwero weruzivo neruzivo mumutauro wechiFrench.
Iyo bvunzo yeFAFA inozivikanwa neQuebec Ministry yeIkutamira, Dhivhisheni uye Kubatanidza (MIDI) uye zvakakosha kuti ishandiswe zviri pamutemo.
Iyo yepamutemo yeFAFAQ Attestation inoratidza kugoverwa kwehuwandu hweimwe module inotorwa pamwe chete nerondedzero yakadzama yehunyanzvi hwakasiyana.
Iri ibasa rako kutarisa neICCC (Kuenda Kunze, Vapoteri uye Citizenship Canada) kana MIDI (Ministry of Immigration, Diversity uye inclusive) ndeapi ma module aunofanirwa kutora.
Iyo TEFAQ inonyanya kushandiswa kweQuebec yekubuda kunze zvinangwa zvinoda B2 level (yepamusoro yepakati).
Izvo zvinodikanwa kunyorera kweQuebec Selection Chitupa (CSQ).
Iyo TEFAQ, yakashandiswa kuongorora kugona kwako kwemuromo uye zvakanyorwa muFrench, ine ma module mana. Imwe module inogona kutorwa yakazvimirira.
Dharira uye upedze TEFAQ kunyoresa fomu. Dzvanya apa kuti utore
Zadzisa iyo online kunyoresa fomu uye ita muripo. (Iwe unozofanirwa kurodha fomu rakazadziswa reFAFAQ)
Chikamu B: Unofanirwa kuendesa gwaro, madhongi, kuenzanisa uye kugutsa mumwe wako.